RAM 10GB ပါမယ်လို့ သတင်းထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 6T Limited Edtion
30 Nov 2018 . 9:50 AM
OnePlus က လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ Event တစ်ခုကို ကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီ Event မှာတော့ OnePlus 6T Limited Editon ကို ထုတ်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
OnePlus က UK ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ McLaren နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ F1 Team နဲ့တွဲပြီး OnePlus 6T Editon တစ်မျိုးကို ထုတ်ပြဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။ အဲ့ဒီဖုန်းကတော့ Speed အတွက်ပဲ ဖန်တီးပေးထားတာဆိုတာကို #SalutetoSpeed ဆိုတဲ့ Hashtag က ဖော်ပြနေပါတယ်။
OnePlus and @McLarenF1. Forever in pursuit of speed. Experience the #SalutetoSpeed on December 11.
— OnePlus UK (@OnePlus_UK) November 27, 2018
ဒီအတွက် သတင်းထပ်ပေါက်လာတာကတော့ OnePlus က အဲ့ဒီ Limited Edtion 6T မှာ RAM 10GB အထိထည့်ပေးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ OnePlus 6T တွေကို RAM 6GB ဒါမှမဟုတ် 8GB ဆိုပြီး Version နှစ်မျိုးနဲ့ ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ Storage အနေနဲ့တော့ 256GB က အများဆုံးဝယ်လို့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီအပြင် Fast Charging ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း OnePlus က ဘယ်လို Surprise တွေ သယ်လာဦးမလဲဆိုတာကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှပဲ သိနိုင်မှာပါ။
Ref: GSM Arena | Android Central
RAM 10GB ပါမယျလို့ သတငျးထှကျလာပွီဖွဈတဲ့ OnePlus 6T Limited Edtion
OnePlus က လာမယျ့ဒီဇငျဘာ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ Event တဈခုကို ကငျြးပသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။ အဲ့ဒီ Event မှာတော့ OnePlus 6T Limited Editon ကို ထုတျပွသှားမယျလို့သိရပါတယျ။
OnePlus က UK ကားကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈတဲ့ McLaren နဲ့ပူးပေါငျးလိုကျပါပွီ။ သူတို့ရဲ့ F1 Team နဲ့တှဲပွီး OnePlus 6T Editon တဈမြိုးကို ထုတျပွဖို့ စီစဉျနတောပါ။ အဲ့ဒီဖုနျးကတော့ Speed အတှကျပဲ ဖနျတီးပေးထားတာဆိုတာကို #SalutetoSpeed ဆိုတဲ့ Hashtag က ဖျောပွနပေါတယျ။
ဒီအတှကျ သတငျးထပျပေါကျလာတာကတော့ OnePlus က အဲ့ဒီ Limited Edtion 6T မှာ RAM 10GB အထိထညျ့ပေးလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ OnePlus 6T တှကေို RAM 6GB ဒါမှမဟုတျ 8GB ဆိုပွီး Version နှဈမြိုးနဲ့ ထုတျပေးထားပါတယျ။ Storage အနနေဲ့တော့ 256GB က အမြားဆုံးဝယျလို့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီအပွငျ Fast Charging ပိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး OnePlus က ဘယျလို Surprise တှေ သယျလာဦးမလဲဆိုတာကို လာမယျ့ ဒီဇငျဘာ ၁၁ ရကျနမှေ့ပဲ သိနိုငျမှာပါ။